राज्य सरकारले उनका दलालहरू लगाएर पहाडमा गुण्डागर्दी गरिरहेको छ- दिलिप घोष (भिडियोसहित) – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsराज्य सरकारले उनका दलालहरू लगाएर पहाडमा गुण्डागर्दी गरिरहेको छ- दिलिप घोष (भिडियोसहित)
राज्य सरकारले उनका दलालहरू लगाएर पहाडमा गुण्डागर्दी गरिरहेको छ- दिलिप घोष (भिडियोसहित)
October 6, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङः दार्जीलिङमा मोर्चा नेता विनय तामाङ समूहका समर्थकहरूले बङ्गाल भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषलाई लातघुस्सी हानेको खबर देशभरि डडेंलो झैं फैलियो। भाजपा अध्यक्ष अमित साहले घोषलाई फोन गरेर वास्तविकताबारे सोधखोज गरेका थिए।
घोषले उनीमाथि भएको आक्रमणको तार नवान्नसित जोडिएको आरोप लगाएका छन्। बङ्गालभरि नै घोषमाथिको आक्रणमको विरोधमा आज विरोध प्रदर्शन, पथावरोध चलिरहेको छ।
गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे घोषले स्पष्ट पारेका छन्। ‘गोर्खाल्याण्ड उनीहरूको (गोर्खाहरूको) माग हो, यसबारे कुनै पार्टीको नेताले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन, भाजपा यसको समर्थनमा हो कि विरोधमा, यसको अर्थ छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यो त केन्द्र र राज्यले आन्दोलनकारीहरूसित वार्ता गरेर निकाल्नु पर्ने सामाधानको कुरा हो। केन्द्रले वार्ताको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, तर राज्य नै यसबारे कुरा गर्न चाँहदैन।’
उनले ममता व्यानर्जी नै सम्पूर्ण समस्याको जड रहेको बताउँदै पहाडमा शान्ति होस् भन्ने कुरा उनैले नचाहेको पनि बताएका छन्।
आज उनले दार्जीलिङ छोडे। पहाड छोड्न गाडीमा बसिसकेका घोषसित भएको छोटो कुराकानी यहाँ राखेका छौँ-
के विमल गुरूङसित तपाईको कुराकानी भयो?
हो, विमल गुरूङले फोन गरेका थिए। हालचाल सोधे। मैले गुरूङलाई भनें, तपाईँले चार महिना मार खानु भो, मैले एकदिन मै खाएँ। चिन्ता नगर्नुस्। बङ्गालमा यस्तै राजनीति चल्छ। यसैबीचमा लडेर हामीले जित्नुपर्छ। यहाँको हालत सुधार्नुपर्छ।
के विमल गुरूङसित भेट्नुहुन्छ?
भेट्ने कार्यक्रम छैन। उनी त भूमिगत छन्। उनलाई पहाड आउन दिइएको छैन। सरकार चाँहदैन विमल गुरूङले मलाई भेटुन्, जनतासित भेटुन्। म कोशिश गर्छु उनीसत जुन ज्यादति भइरहेको छ, त्यो कम्ति होस्।
फोनमा अरू के के कुरा भो?
उनले दुःख प्रकट गरे, उहाँले भन्नुभो- तपाईँ यहाँ आउनु भो र तपाईँसित यस्तो भयो, म दुःखी छु।
मैले भनें, दुःखी हुने कुनै कारण छैन। मलाई यहाँको हालतबारे थाहा भयो। सरकारले कसरी यहाँका मानिसहरूलाई दबाइरहेको छ। जनताको गणतान्त्रिक अधिकार छिन्दैछ। गुण्डा लगाएर यहाँ जे पनि गर्दैछ, त्यो तपाईँमाथि थोप्दैछ। वास्तवमा स्थिति अलग रहेछ। राज्य सरकारले उनका दलालहरूलाई लगाएर यी सब गरिरहेको रहेछ। तपाईँलाई बदनाम गर्दैरहेछ, त्यो मैले थाहा पाएँ।
अब बिजेपीले के गर्छ त?
बिजेपीले सबै गर्छ, जे जे गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो हिसाबले गर्नेछौँ।
जाँदाजाँदै के भने दिलिप घोषले?
Gepostet von खबर म्यागजिन am Donnerstag, 5. Oktober 2017
जिएसटी नियममा फेरबदल हुने सम्भावना
घोष आक्रमण काण्डः दुईको पक्राउ